१३औँ इक्यान शैक्षिक मेला भृकुटीमण्डपमा सुरु – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २६ असार, २०७६ । १३ औँ इक्यान शैक्षिक मेला बिहीबारबाट काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा सो मेला सुरु भएको हो ।
मेलाको समुद्घाटन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे । उद्घाटनपछि बोल्दै डा. भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाकालागि विद्यार्थीहरुले विदेश पढ्न जानु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले विदेश पढ्न जाने र उतै पलायन हुने परिपाटी गलत रहेको बताए । विदेशमा विशेष ज्ञान आर्जन गरेर नेपाल फर्किएपछि देशलाई योगदान गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो ।
संघका अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा ब्रिटिस काउन्सीलका प्रतिनिधि, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले इक्यान मेलाले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, ‘एकै थलोमा १५० भन्दाबढी एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरु जम्मा भएका छन्, विद्यार्थीका लागि जुनसुकै देश, त्यहाँको शिक्षा नीतिसँगै विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नका लागि अवसर पनि हो ।’
पाण्डेले विद्यार्थीका लागि विदेशी शिक्षाबारे सम्पूर्ण जानकारीसँगै करिअर काउन्सिलिङका समेत गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘मेलामा सहभागी कन्सलटेन्सीका परामर्श दाताहरुले मेलामा आउने विद्यार्थीहरुको क्षमता पहिचान गरी उसलाई कुन देश, कस्तो विषय अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक छ जस्ता कुरामा समेत करिअर काउन्सेलिङ गर्नेछन् ।’
मेलाले विद्यार्थी र उनका अभिभावकलाई अध्ययन गर्न जाने देश, विश्वविद्यालय वा कलेज र प्रकृयाको बारेमा सही र स्पष्ट जानकारी दिन सहयोगी बन्ने इक्यानका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । उनले मेलाबाट भरपुर सहयोग र सही सूचना लिन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे ।
बिहीबारबाट सुरु भएको मेला आइतबार अर्थात् असार २९ गतेसम्म चल्ने छ । मेलामा तीन सय भन्दा बढी कन्सल्टेन्सी र विश्वविद्यालय, कलेजका स्टलहरु राखिएका छन् । यो मेलामा १ लाख ५० हजारले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: 2019-07-11 2019-07-13 , संवाददाता: आजको खबर